ကလေး သင်္ချာတော်အောင် – Healthy Life Journal
မေး. ကလေး သင်္ချာတော်အောင် ဘယ်အရွယ်ကတည်းက ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးသင့်ပါသလဲ။
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. သင်္ချာဆိုတာ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်အရွယ်အစား၊ အရေအတွက်နဲ့ အစီအစဉ် အနေအထားဆိုင်ရာ သဘောတရား နိယာမကို လေ့လာတဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို စဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်ပြီး အဖြေရှာတဲ့ပညာရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ကျောင်းဆရာတွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ “နိုင်ငံတော် သင်္ချာကျောင်းဆရာများ ကောင်စီ” (The National Council of Teachers of Mathematics) ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး သင်္ချာကျောင်းဆရာများအသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ချာပညာမှာ “တွေးတောဆင်ခြင်တဲ့ သင်္ချာ” (Thinking Maths) နဲ့ “ပမာဏသင်္ချာ” (Content Maths)ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ အဲဒီအဖွဲ့က အဆိုပြုထားပါတယ်။
တွေးတောဆင်ခြင်တဲ့ သင်္ချာမှာ ပြဿနာကို အဖြေရှာခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် စဉ်းစားခြင်း၊ အခြင်းအရာများ ပေါင်းစည်းဆက်စပ်နေမှုကို လေ့လာခြင်း စတဲ့ အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ပမာဏသင်္ချာမှာ ရေတွက်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်အနေအထားကို သိရှိနားလည်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းနဲ့ ဒသမစနစ်ကို နားလည်ခြင်း၊ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်သဘောကို နားလည်ခြင်း စတဲ့ အပိုင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
(က) တွေးတောဆင်ခြင်တဲ့ သင်္ချာဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ကလေးငယ် လမ်းလျှောက်စ ပြေးတတ်စအရွယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာကို အဖြေရှာတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိအောင် နေ့စဉ် တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲကို ဘယ်လိုဖြေရှင်း မလဲဆိုတာ မေးကြည့်။ သူတို့အသိနဲ့ ပြောတာကို နားထောင်ပါ၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးသင်ကြားပေးပါ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် စဉ်းစားတတ်တာကို အားပေးဖို့ ကလေးကို သင့်တော်တဲ့ မေးခွန်းမေးပါ၊ ပထမ သူတို့ ဖြေကြားပုံကို နားထောင်ပါ၊ နောက်မှ လူကြီးအသိနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိအောင် ရှင်းပြပါ၊ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို သိရုံသာမကဘဲ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုဖို့ စဉ်းစားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) ပမာဏသင်္ချာရဲ့ သဘောကို ကလေးအသက် ၂ နှစ်- ၃ နှစ်အရွယ်ကစပြီး လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မူကြိုအရွယ်ကလေးငယ်တွေကို ကစားကွက်နဲ့တွဲပြီး သင်ကြားပေးနိုင်တာတွေကို ဖော်ပြပါမယ်။ စက်ဝန်းပုံ၊ စတုရန်းပုံ၊ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ၊ တြိဂံပုံ၊ အံစာတုံးပုံ၊ ပိရမစ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို ခွဲခြားနားလည် အမည်ခေါ်တတ်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ် (၁) မှ (၁၀) အထိ၊ (၂၀) အထိ ရွတ်ဆိုတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ၊ ပစ္စည်းတွေကို ရေတွက်ခိုင်းပါ၊ လက်ချောင်းတွေကို ရေတွက်ခိုင်းပါ၊ အလေးနဲ့ အပေါ့၊ နည်းတာနဲ့ များတာ၊ ကြီးတာနဲ့ ငယ်တာကို ခွဲခြားနိုင်အောင် သင်ကြားပေးပါ။
အတွင်းနဲ့ အပြင်၊ အထက်နဲ့အောက်၊ ဘယ်ဘက်နဲ့ ညာဘက်၊ ရှေ့ဘက်နဲ့ နောက်ဘက်၊ အပေါ်ဆုံးနဲ့ အောက်ဆုံး စတဲ့ အယူအဆကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပါ။ အတိုနဲ့ အရှည်၊ အနိမ့်နဲ့ အမြင့်၊ အလေးနဲ့ အပေါ့၊ အကျယ်နဲ့ အကျဉ်း စတဲ့ ကွဲပြားမှုကို သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြပါ။ ပစ္စည်းတွေကို အရောင်အလိုက်၊ ပုံသဏ္ဍာန်အလိုက်၊ အသုံးအဆောင်အလိုက် အုပ်စုခွဲခြားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပါ။ ငွေစက္ကူ အရွယ်အစား ပုံသဏ္ဍာန်အရောင်အဆင်းပေါ်မူတည်ပြီး ငွေတန်ဖိုး ခွဲခြားတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ။ ကလေးနဲ့အတူ ကစားတဲ့ အချိန်၊ ပုံပြောတဲ့ အချိန်၊ အစာစားတဲ့ အချိန်၊ အားလပ်လို့ အပြင်ထွက်လည်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ကြုံသလို ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။
အပိုဒ် (က)နဲ့ (ခ) မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေဟာ သင်္ချာဘာသာကို သင်ကြားပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ချာဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Items:Featured2, kid, maths